Ngo imisipha, esisogwini esiswini, ezihlukahlukene imisebenzi ehlukene, ezifana nokugcina ukuma lesifanele, amortization nezinye izitho zangaphakathi. Kodwa abantu abaningi abazi ukuthi imali fat okhalweni ukukhuluma hhayi kuphela mayelana ezimbi impilo. Abantu abaningi bakholelwa ukuthi okhalweni mncane - lihle futhi sexy, ngakho azama ukwenza ngayo esiswini ngokuphelele flat, okhalweni ngokugcwele - ngomusa. Indlela yokwenza okhalweni? Ziningi izindlela. Okokuqala, kufanele ngaso sonke isikhathi ukhawule phezu-ukusetshenziswa ephezulu ikhalori ukudla, musa ukulayisha ebusuku. Isixazululo ephelele yombuzo zendlela yokwenza okhalweni encane, bazocula umzimba ezikhethekile.
Lo msebenzi wenziwa sidindilize. Imilenze kufanele ivikelwe nge into esindayo efana usofa noma uhlangothi iKhabhinethi. Izandla ngemuva ikhanda lakho usethe, ne izindololwane kahle ukuncibilikisa esandleni. Yenza ephakamisa umzimba, kuyilapho okwenza okhishwa ngamakhala. Esefikile isikhundla perpendicular phansi, enye ngemuva kwenye, okwenza umoya. Phinda kuze kube izikhathi ezingu-30.
Lokhu isebenza kuzo zonke izingxenye cindezela, futhi kuzosiza ekuxazululeni impikiswano kanjani ukwenza okhalweni umuvi. Ungakwazi izinkinga umsebenzi, enza ukusonta ngenkathi ephakamisa kwesokunxele bese ngakwesokudla kuyanda esilandelayo. Ngakho, ingxenye wasebenza we loin uhlangothi eziyinkinga kakhulu. Lezi zitho zomzimba akuvamile enze umsebenzi ngokomzimba, ngakho amahwahwa agcinwe lapho ngokushesha kakhulu, futhi siyisuse kuwo lapha kunzima.
Amadolo agobile, amanga phansi. Yenza ephakamisa ibhande ehlombe, ephumula phezulu imizuzwana embalwa (umoya). Khona-ke, makehle ngenkathi ukuphefumula futhi ukukhulisa emahlombe akho futhi. Lokhu umthwalo isebenza kahle engxenyeni engenhla cindezela bese kusiza ukuxazulula umbuzo zendlela yokwenza okhalweni mncane kule ndawo. Njengoba ekusebenziseni langaphambilini, ungakwazi izinkinga umsebenzi, enifeza oqeda ibhande lamahlombe kanyekanye ne ezimazombe ku eyodwa bese ehlangothini lwesibili. Breathing ngisho.
Fast ngokwanele ukuba ashise amanoni nokusiza ekuxazululeni izinkinga zendlela yokwenza okhalweni enhle, can isivivinyo esilandelayo. Kuyadingeka ukuba ugobise ingalo futhi ume nabo yokubeka. Emuva, izibunu namathanga yakha umugqa owodwa. Ukuma yokubeka eside ngangokunokwenzeka. Ungaxaki ukhalo phansi, hhayi uyoluphakamisa. Lapho ukwenza ukuzivocavoca ukugcina imisipha yakho besisu esishubile, hhayi eziphumulele kubo.
Fine usebenzela ephansi imisipha besisu nezicubu, okuyinto zijule, isivivinyo esilandelayo. Ukugoqa imilenze yakho perpendicular phansi futhi bawaqukule ngenhla emzimbeni. Yenza kuyanda okhalo ngaphandle kokushiya usiphule emuva ekufezeni izinyawo. Okokuqala, umsebenzi kungenziwa ngobukhulu ubunzima, kodwa, kamuva, lapho izicubu ngokuqina, ukuze afeze imithwalo yakhe iyoba lula kakhulu. Lokhu ngeke kuphela kukusize ekuxazululeni impikiswano yokuthi indlela yokwenza okhalweni izacile, kodwa futhi ubambe Yiqiniso prophylactic, kwandisa peristalsis, nakho ngokungaqondile kuthinta ivolumu esiswini.
Manje, lapho sekumcacela ukuthi ukwenza okhalweni ukwenzela ukungena okuncane kakhulu, waqhubeka ebekezela ngenkuthalo nizifeze zonke lezi izincomo, bese umphumela zizobonakala ngokushesha kakhulu!